Saturday June 23, 2018 - 06:28:29 in Wararka by Super Admin
Wadanka Kenya wali waxaa kasoo yeeraysa baroorta ka baxaysa qoysaska askarta looga dilayo dagaalka ka holacaya gudaha dalka soomaaliya iyo weerarada ka dhacaya dhulalka muslimiinta ee cadawgu gummeysiga ku hayo.
sawir cusub gaadiid melleteriga Kenya laga qabsaday
isbuuc walba meydadka askar kenyaan ah oo lagu dilay wilaayaatka islaamiga Soomaaliya iyo gobollada NFD ama Lamu ayaa lageeyaa magaalooyinka waaweyn ee wadanka Kenya sida Nairobi iyo Kasimo.
Qoysaska wiilashooda lagu dilay weerarada shabaabul Mujaahidiin ka wadaan labada dal ayaa ugu baaqay dowladda daalimadda Kenya in ay ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya ayna soo gaba gabeyso ka qeyb qaadashada duullaanka gardarrada ah ee lagusoo qaaday muslimiinta geeska afrika.
farriintii ugu dambeysay ee lagu codsanayo in ciidanka kenya lagasoo saaro soomaaliya waxay katimid qoysaska askar lagu laayay qarax miino oo ka dhacay deegaanka Libooya kenya ee xuduud beenaadka dhaca.
illaa iyo 5 qoys oo Kenyaan ah kuwaas oo wiilashoodii lagu dilay weerarka Mujaahidiinta ayaa dowladda kenya ugu qaabay in ay ciidamadeeda kalasoo baxdo soomaaliya si uu ujoogsado qulqulka dhiigga wiilashooda dagaallada ku hoobanaya, ehelka Kiprop iyo Maregut oo kamid ahaa askarta GSU-da oo lagu dilay weeraradii ugu dambeeyay ee ka dhacay soomaaliya ayaa cod ujeediyay saraakiisha melleteriga Kenya.
"waa in dowladdu ciidamadeenna kalasoo baxdo dalka Soomaaliya waana in ay magdhow siisaa ehellada ay ka dhinteen ciidamadii lagu dilay howlgallo kala duwan oo ka dhacay wadanka" ayuu yiri mid kamida ehellada askartii ciidamada kenya looga laayay soomaaliya.
Weeraradii ugu dambeeyay ee ciidamada shabaabul Mujaahidiin ay ka fuliyeen gobollada wajeer iyo Jubooyinka ayaa lagu dilay ciidamada booliska sida melleteriga utababaran ee GSU-da loo yaqaan.
Isdaar maqal iyo muuqaal ah oo isbuucii lasoo dhaafay ay soo saartay mu'asasada alkataib ayaa lagusoo bandhigay howlgallo melleteri oo mujaahidiintu ku baacsanayeen ciidamada dowladda saliibiyadda kenya waxayna howlgalladaasi badankood ka dhacayeen gobollada Lamu,Mandheera iyo Gaarisa ee muslimiinta xoogga looga heysto.